Freshcaller: Virtual Phone System maka Saleslọ ahịa dịpụrụ adịpụ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 1, 2020 Tọzdee, Disemba 1, 2020 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ndị otu ahịa dịpụrụ adịpụ etolitewo na ụlọ ọrụ ndị na-ewu ewu, ọrịa na-efe efe na mkpọchi gbanwere ndị ahịa oge a ọrụ n'ụlọ. Ọ bụ ezie na njedebe nke mkpọchi mkpọchi nwere ike ịgbanwe ụfọdụ gaa otu ka ha laghachite n'ọfịs, echeghị m na ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-achọ ịkwaga ahụ. The enweghị isi mmefu nke a ogbe ndịda ahịa ụlọ ọrụ nanị ga-enweghị a laghachi na ulo oru mbo na ya ozugbo mere… karịsịa ugbu a na ụlọ ọrụ ndị ọma na ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ.
Ọ bụ ezie na otu akụkụ nke rịrị elu na uto bụ mkparịta ụka vidiyo, ihe ọzọ dị mkpa maka ndị otu ahịa dịpụrụ adịpụ bụ sistemụ njikwa oku. Remote sales otu chọrọ ole na ole na-akpọ atụmatụ mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ:
Kpọọ Masking - Ikike nke ịkpọ oku na mpụga na onye na-akpọ oku nke na-anọchite anya ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụghị nọmba nzuzo nke ndị na-ere ahịa ahịa.
Oku nlekota - Ikike maka ndị na-azụ ahịa ị toa ntị na oku ndị na-apụ apụ ma nye nduzi nye ndị nnọchi anya ahịa ha iji melite nzukọ ahịa ha.
Kpọọ Mkpesa - Ikike maka ndị na-ere ahịa iji soro olu oku na-apụ apụ iji hụ na ndị nnọchi anya ahịa na-arụpụta ihe.
Freshcaller: Ekwentị Sistem maka Otu Ahịa
Onye ohuru bụ a ekwentị ekwentị kwalite asụsụ ọma na nke ahụ wuru maka ndị otu ọrịre. Ọbụghị naanị na enwere ụdị njirimara niile dị n'elu, mana ọ dịkwa sistemụ ekwentị siri ike nke zuru oke ndị ahịa dịpụrụ adịpụ na-inbound na-eme na outbound ahịa oku. Na Freshcaller enwere ike ịgba ọsọ site na ekwentị mkpanaaka gị.
Onye ohuru nwere atụmatụ ndị ọzọ ga - eme ka ị rụọ ọrụ karịa maka ndị otu egwuregwu gị:
Ntugharị Nọmba na Nnweta - Nyefee ọnụ ọgụgụ gị dị ugbu a na Freshcaller ma ọ bụ tinye nọmba mpaghara, mba ofesi, na ọnụ ọgụgụ efu na azụmaahịa gị.
Kpọọ Masking - Nye oku gị aka nke onwe site na iji nọmba nke onwe gị kpuchie nọmba azụmahịa gị.
Otutu onu ogugu - Nye nọmba gị na nọmba ọ bụla na mba ọ bụla ha na-ezube inye nkwado maka oku ha.
Ozi Udo - Tinye ozi edere edere na pịa nke bọtịnụ na igbe ozi olu nke atụmanya nke enweghị ike ịga oku.
Nlekota oru & ahia - Gee ntị na mkparịta ụka na-aga n'ihu ma sonyere oku iji nye aka na enyemaka maka onye na-agba mgba na-emechi nkwekọrịta ahụ.
Kpọọ Mkpado - Choro ka ndi nnochita ahia gi kpoo oku obula site n’onodu nke oku a ka inwee ike ileba oku na oku uzo.
Ngwa mkpanaka - Nye ndị nnọchi anya gị ikike ire site na ebe ọ bụla ọrụ ha na-ewe ha, ya na ngwa Freshcaller ha nwere ike ịme ma kpọọ oku ma mepụta ụzọ na njem.
Omume njikọ - Mepụta ụzọ ma ọ bụ tinye oku na iduga ụzọ dị na ya Freshcaller-Freshsales mwekota. Gbaa mbọ hụ na oku ọ bụla abanyela n'ime akaụntụ CRM gị.
Ntugharị oku na Ozi olu - Hazie ozi olu ozi olu gị na-ekele gị, na-aga mgbe awa gachara na ozi olu, ma ọ bụ mezie ozi olu na-arụ ọrụ.
Mepụta Oge Azụmaahịa Gbasaa - rụọ ọrụ gị oku center dabere na kpọmkwem oge na ụbọchị na ona gị azụmahịa. Nwere ike idozi oge niile ka ị na-ebuwanye ibu.
Kpọọ Nkeji na Multi-Level IVR - Debe usoro PBX nke na-agbanwe agbanwe nke nwere ike iji dọọ ndị na-elekọta gị ma ọ bụ ndị otu ọkpụkpọ n’ụzọ dị mfe, yana ike ịgụnye nhọrọ ọrụ onwe onye.
Nwee Ejiri Ntanye Ekekọrịta - Kekọrịta otu nọmba ekwentị n'ofe ọtụtụ ndị ọrụ, ma zaa oku ekwentị na-abata site na ekwentị ọ bụla, ebe ọ bụla.
Mepụta ezumike na ịme usoro iwu - Tinye ndepụta pụrụ iche nke ezumike maka nọmba ekwentị ọ bụla azụrụ n'ime akaụntụ Freshcaller gị iji mee atụmatụ maka oku mbata natara n'oge ezumike gị. Mepụta ma jikwaa usoro ntụgharị pụrụ iche iji mee oku na-abata n'oge ezumike.
Melite Omenala Ekele - Jiri ohere a iji hazie njide, kwụ n'ahịrị, ma ọ bụ oge echere egwu iji gosipụta ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ọkwa ọhụụ.
Jirichaa nzaghachi site na ichere Chere - Freshcaller ga-eme ka ndị kpọrọ oku mara ọkwa ha na kwụ n'ahịrị ka ha na-eche oge ha iji soro ndị otu nkwado gị kwurịta okwu.
Gbochie Oku Spam - Na-akpaghị aka gbochie spam na-akpọ ma kwụpụ ndị na-akpọ oku site na mpaghara ụfọdụ na-anwa ịkpọtụrụ azụmahịa gị.
Azịza Oku na ekwentị SIP - Nata oku mbata gị ozugbo na ngwaọrụ SIP gị ebe ị ka nwere ike iji Freshcaller dashboard maka ịnyefe, ndetu, wdg.
Gbanwee Oku site na iji Voicebots - Mee ka azụmahịa gị nye gị ohere ị nweta atụmanya na-enye obi ụtọ na azịza ozugbo maka nchegbu ha ọbụlagodi na enweghị ndị ọrụ.
Gbanwee nkesa oku gị - Obi ụtọ na atụmanya gị site na nzaghachi ngwa ngwa site na ịghagharị oku nye ndị nnọchi anya ahịa ziri ezi.
Bubata Nduzi Gị - Ọ bụrụ na ị nwere ndepụta nke ndu, ịnwere ike bulite ha niile n'otu oge kama ịmepụta kọntaktị ọ bụla iche iche wee chekwaa oge gị.
Irè Calling kwụ ọtọ Management - Melite oku kwụ n’ahịrị ka ị nata ndị na-akpọ oku n’ụzọ nkwanye ugwu, kesaa ibu oku gị n’otu aka, ma mepụta iwu ntanye na ntanetị.
Automate Oku gị Nsoro - Mepụta usoro iwu ọdịnala dabere na ntinye sitere na usoro ndị ọzọ dịka CRM ma ọ bụ Helpdesk gị.
Ngosipụta: Anyị bụ mmekọ Onye ohuru ma na-eji njikọ ha.
Tags: Kpọọ maskingonye ohuruinbound ahịa okuoutbound ahịa okupbxahịa dịpụrụ adịpụoku di anya okuọrụ dịpụrụ adịpụahịa na-akpọ ngwa mkpanakamkpado ịkpọ okuokumebere ekwentị usoroụda olu
Remove.bg: Wepu ihe ndabere na foto site na isi, ndị mmadụ na ihe na-enweghị ntụpọ na AI